သြဂုတ်လ 2014 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » သြဂုတ်လ
ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana IBC2014 မှာမီဒီယာသစ်စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းမိတ်ဆက်
Fremont, CA - အမ်စတာဒမ်အတွက် IBC2014 နောက်လမှာ, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana ရှယ်ယာအသုံးပြုသူများ, ပြင်ဆင်ရန်ဖမ်းဆီးဖို့ခွင့်ပြု application များတဲ့ suite ကိုကမ်းလှမ်းရာသည်၎င်း၏မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း, မိတ်ဆက်နှင့်အကြောင်းအရာကိုစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ် - အဖြစ်, လိုက်နာမှုသက်သေပြဖို့စောင့်ကြည့်နှင့်ဗီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ။ ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana ဟာ IBC စည်းဝေးကြီးအတွင်း EMEA Gateway မှာ၏တဲ၌ဤပလက်ဖောင်းပြပါလိမ့်မယ် - ...
သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက််ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Multi-Screen ကိုဗီဒီယို Delivery ဘို့မဟာဗျူဟာ '' တိုင်းဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်မှာ '' အမြော်အမြင်ကြေညာ
RENNES, ပြင်သစ် - သြဂုတ်လ 26, 2014 - သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကယနေ့တိုင်းမျက်နှာပြင် (TM) နောက်ကွယ်မှာ၏ပစ်လွှတ်, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Multi-screen ကိုန်ဆောင်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့နဲ့ cloud-based အရင်းအမြစ်များကို-ဝုဏ်အပေါ်ပေါင်းစပ်တဲ့စုစည်းနှင့်အသိဉာဏ်ကိုဗီဒီယိုဖြန့်ဝေချဉ်းကပ်နည်းကြေညာခဲ့သည် ။ တိုင်း Screen ကိုနောက်ကွယ်မှတိုင်း key ကိုအတူတစ် All-လွှမ်းခြုံကဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အဦများကိုနောက်ဆုံးပေါ်စားသုံးမိ, အမှတ်တံဆိပ်, ကြော်ငြာသွင်း, encoding က / transcoding နှင့်ထုပ်ပိုးနည်းပညာများအတူတကွဆောင်တတ်၏ ...
တားမြစ်ထား Integrated Timecode လုပ်ပြီး Buddy ထဲသို့ Forscene ပလက်ဖောင်းမှတဆင့် MovieSlate ကို iOS App ကို
လန်ဒန် - သြဂုတ် 26, 2014 - တားမြစ်ထား Technologies က Plc (AIM: FBT), အ AIM-ကိုးကားပိုင်ရှင်နှင့်စျေးကွက်-ဦးဆောင်သောမိုဃ်းတိမ်ကိုဗီဒီယိုပလက်ဖောင်း Forscene ၏ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, ယနေ့က MovieSlate က iOS ကနေတဆင့် Timecode စနစ်များလီမိတက်ရဲ့ Timecode လုပ်ပြီး Buddy နှင့်အတူ Forscene ပေါင်းစည်းမူကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ လျှောက်လွှာ။ , MovieSlate ထုတ်လုပ်မှု slates များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှင့် Timecode လုပ်ပြီး Buddy စနစ်အသုံးပြုသူများယုံကြည်စိတ်ချရသောနဲ့အလွယ်တကူ generate ပေးနိုင်ပါတယ် ...
လိုင်ယွန်ဗီဒီယိုအသစ်လွင်ဆုံးမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှု Truck ကားများတွင် Calrec Apollo အသံ Console ထည့်သွင်း
မိုဘိုင်းယူနစ်၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးသားပွဲ Primetime သူဟာ Emmy (R) ဆုပေးပွဲနီကော်ဇော Preshow HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန်ခဲ့ - အမေရိကန်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီလိုင်ယွန်ဗီဒီယို marking ၎င်း၏အသစ်ကပြင်ပမှာထုတ်လွှင့် (OB) ထရပ်ကား, လိုင်ယွန် 14 အတွက် Calrec အသံတစ်ဦးထံမှ Apollo ဒီဂျစ်တယ်အသံ console ကို install လုပ်ထားလိုက်ပါတယ် လိုင်ယွန်ရဲ့ All-Calrec ရေတပ်အတွက် 11th Calrec console ကို။ လိုင်ယွန် 14 အားကစားအမျိုးမျိုးကိုဖုံးလွှမ်းရန်အတွတ်ဦးတည်နေသည် ...
Dejero ယနေ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, 1U form မှာက၎င်း၏ထိန်သိမ်း-တပ်ဆင်ထား Dejero တိုက်ရိုက် + အသံလွှင့်ဆာဗာတစ်ခု All-ဗားရှင်းသစ်၏ပစ်လွှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာ - ဆာဗာ Dejero တိုက်ရိုက် + Bond ကြိုးမဲ့ transmitter Waterloo, အွန် မှစ. အစွမ်းထက်လက်ခံမှ 1U Form ကို Factor ထဲသို့လုပ်ဆောင်မှုနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကွင်းဆင်း transmission pack မှာ အချက်။ အသစ်တိုက်ရိုက် + အသံလွှင့်ဆာဗာ Dual-မလိုအပ်တဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ RAID hard drive တွေလည်းပါဝင်သည် ...
Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းတီဗီ Azteca ကိုဘူတာ Upgrade များထဲမှကြံ့ခိုင်ရပ်တည်
မက္ကစီကိုရဲ့အဓိကစီးပွားဖြစ်ထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်များထဲကတစ်ခု, တီဗီ Azteca, မျိုးစုံဘူတာရုံပြုပြင်မှုများကိုခံယူဖို့စတင်တဲ့အခါ, မောဖာရ Trevino, ကွန်ယက်၏ Project - Miller က DS40 tripod စနစ်များမက္ကဆီကိုစီးတီး, မက္ကဆီကို, သြဂုတ် 20, 28 နှင့်အတူ Project မှ 2014 စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးပြင်ဆင်ပေးခြင်းဘူတာရဲ့ ENG ဌာနခွဲ 40 စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးအသစ် ENG နှင့်အတူ Project မှ 40 ရဲ့သတင်းကဏ္ဍ refurbishing ၏စိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်စေခဲ့သည် ...
optical MADI Interface ကိုသင်တန်းနည်းပြများနှင့် Accelerator ပိုမိုပျော့ပျောင်း, အကုန်အကျနည်း IP ကိုပေး Audio MONTBONNOT, ပြင်သစ်ခါနီးက Synchronous အသံ မှစ. Studios က '' Shift - သြဂုတ်လ 26, 2014 - IBC2014 မှာ Digigram ကုမ္ပဏီ၏အသစ်တစ်ခု optical Multichannel အသံဒစ်ဂျစ်တယ် Interface (MADI) option ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ် LX-IP ကို ​​RAVENNA PCI Express (R) (PCIe (R)) sound card ကို။ ၎င်း၏ LX-IP ကို ​​Dual-port ကို RAVENNA / AES67 sound card ကိုအပေါ် MADI option နဲ့အတူ ...
အင်ဒရူး Demeter: မီဒီယာသစ်, နယူးဖြစ်နိုင်သော - ဆယ်ကျော်သက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှမ်းခြုံ & IBC 2014
အမြော်အမြင် geniuses ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမ်စတာဒမ်အတွက် IBC 2014 တက်ရောက်ခြင်းနှင့်တကွလူအပေါင်းတို့အံ့သြဖွယ်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေမြင်နေနေစဉ်, သငျသညျတခုစိတ်ကူး, ကြီးထွားနှင့်မောင်းဖို့စိတ်ကူးအဘို့အညာဘက်လေထုလိုအပ်အောင်မြင်တဲ့ရူပါရုံကိုအဘို့ဆိုတာသတိရပါ။ တိုးတက်များနှင့်တိုးချဲ့နည်းပညာများကလူတစ်ဦးတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအကွာအဝေးအသစ်ဖြစ်နိုင်ခြေခွင့်ပြုပါ။ အသစ်မီဒီယာအားလုံးကြောင်ဗီဒီယိုများမဟုတ်ပါဘူး ...
1 ၏စာမျက်နှာ 3212345 » 102030...နောက်ဆုံး»